China Ft Renewing Machine SC-004 ụlọ ọrụ na-emepụta | Jinqiu
akwa nke akwa di elu, ya mere o nwere ike di elu, idi ala na okpomoku. A na-eji ihe nkedo eji eme ihe na-eme ka ihe ndozi weghachite site na nkedo nke ihe di elu iji belata mkpọtụ na ihe ndi ozo nke a na-esite na POM nwere oke mma. A na-eji mkpuchi alloy na igwe ahụ rụọ ọrụ dị elu iji hụ na ike zuru ezu na ọdịdị mara mma.
Voltaji / Oge: 220V-240V / 50Hz
Gbanyụọ ọsọ ntụgharị； 154rpm / min
Base efere n'obosara: 17 ”
Isi eriri ogologo: 12m
Ibu ibu nke isi ahu: 34.2kg
Mkpokọta nha: 73.66kg
Ibu ibu iron: 1X14.5kg
Aka mbukota size: 375X126X1133mm
Main ahụ mbukota size: 560X450X350mm
Ngwa: Isi ahụ, aka, tankị mmiri, ihe njide mpempe akwụkwọ, ahịhịa siri ike, ahịhịa dị nro, igwe eji eme ihe, ịkwọ ụgbọala
Họ bụ maka ịrụzi igwe eji emegharị ụlọ?
Ejikwala ihe dị mkpa na ihe na-echedo ya.
Gbanwee akuku nke igwe na-emeghari ohuru mgbe ejighi ya. The n'akuku ukporo aka nwere ike weliri, nke adaba maka ịtụkwasị na-azọpụta ohere. Ka ọ dị ugbu a, ezé ezé dị nkọ nke aka ọrụ na-atọghe. A na-ekwe ka ịmegharị ọrụ na-arụ ọrụ n'akụkụ oche aluminom na ọnọdụ vetikal na ala. Mgbe ahụ tọpụ akuku ukpụhọde njikwa na-arụ ọrụ ahụ nwere ike ofu vetikal ọnọdụ. N'oge ahụ, ngwaọrụ nchekwa dị na njikwa ga-agbanye na nchekwa nke nchekwa isi na-akpaghị aka. Ọbụna a gbanwere mgba ọkụ a gwuru na etiti; ọ kabeghị ọkụ. Ya mere, ọ nwere ike igbochi nrụrụ ọrụ ma ọ nwere ike ịme mkpuchi nchekwa nke onye ọrụ.
Na ojiji nkịtị, a ga-ebuli aka na-emegharị akụkụ ya ma ọ ga-atụgharị ya na nkuku nke ndị ọrụ na-eme (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 45)Celsiusn'akuku ya na ala). Mgbe ahụ tọpụ akuku ukpụhọde ahụ na-arụ ọrụ bụ ofu.
Mgbe ịmalite nhicha, a na-eme ka otu n'ime mkpịsị aka abụọ ejiri aka gbanwere na etiti etiti
otu oge a na-agbanye ike ọkụ ọkụ, yabụ amalitela ịkwọ ụgbọala
nhicha nhicha maka ịrụ ọrụ.
Nke gara aga: BD2AE-Ulo ohuru ohuru
Osote: SC-1500 Ọsọ ọsọ ọsọ Burnisher
Automatic Ft Nhicha Machine
Igwe nhicha ụlọ dị n'ime ụlọ
Flolọ Ọrụ Ihicha Industriallọ Ọrụ
Multi-Functional Ft nhicha Machine
Ngidi Ulo nhicha
Atọ na-na-otu kapetị Cleaner - DTJ3A / DTJ4A (Cold ...